Marka Ay La Haraan Cashuurta Gobolka Kaaga Soo Noqon Laheyd | LawHelp Minnesota
Marka Ay La Haraan Cashuurta Gobolka Kaaga Soo Noqon Laheyd
Marka Ay La Haraan Cashuurta Gobolka Kaaga Soo Noqon Laheyd (PDF)271.64 KB
Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa kolka uu gobolku kaa hayn karo ama uusan haysan karin lacagta canshuurta kaaga soo noqonaysa.
Maxay Tahay Qabsashada Canshuurta?
Waaxda Canshuurta ee Minnesota waxay kaa qaadi kartaa canshuur celinta kaaga soo noqota cashuurta dakhliga ama tan guriga, ama bakhtiyaa nasiibka, haddii aad lacag ka qabtid Gobolka ama wakiilka Degmada. Waaxda Cashuuraha waxay lacag celintaada u diraysaa wakiilka wax kugu leh. Tan waxaa loo yaqaan “Dib u soo qabashada dakhliga”. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo bixintii dheeraadka ahayd ee lagu siiyay oo la xiriirtay gargaarka dadweynaha, kharajka caafimaadk ee degmada ama cisbitaalada, amaahda dugsiga, kaalmada caruurta, daynta laga qabo hay’adda Guryaha Dadweynaha, ganaaxa ama magdhowga dacwad dambiyeed.
Ma jiraa waqti aysan qaadan Karin lacag celintayda?
Xitaa haddii lacagta lagugu leeyahay, ma qaadan karaan lacag celintaada haddii:
Dayntaadu haddii ay tahay kharaj caafimaad, OO dakhligaaga markii lagu siinayay daryeelka caafimaadka uu ka hooseeyay heer gaar ah. Heerkaas waa isbedelaa sannad kasta. Wac Waaxda dakhliga telefoonka (651) 556-3003 ) si aad u ogaato xaddiga dakhliga ee sannadk lagu siiyay daryeelka caafimaadka. Xaddiga dakhligu waxay ku xirrantahay inta qof oo kugu tiirsan oo qoyskaagu ka koobnaa sannadkaas.
Amaahdaadu waa gargaar dowladeed oo siyaado ah oo lagu siiyey, sida MFIP ama kaalmadda haynta ilmaha (childcare) WAADNA aad heli kartaa wali gargaarka dowladda ama SNAP raashin (food stamps). Laakiin way qaadan karaan lacag celintaada adigoo weli ku jira gargaarka haddii dheeraad lagu siiyay, waayo been baad sheegatay ama waxaad jebisay sharciyada barnaamijka gargaarka si ula kac ah.
Waxaad wakiilka la gashay qorshe dib u soo celin ah, waadna wadaa bixinta wixi lagugu lahaa, oo qorshahana waxaa lagu sheegay in aysan isticmaalayn dib u soo qabasho.
Dayntaadu waxay taagnayd wax ka badan 6 sanno. Sharcigaan waxaa jira wax uusan qabanayn (laga reebay). Tusaale amaahda ardaynimada waa lagu qaadayaa dib u soo qabashada xitaa 6 sanno ka dib.
Xaaladaha kor lagu soo sheegay oo dhan, ma qaadan karaan lacag celintaada, laakiin waa in aad taas ugu sheegtaa qoraal.
Waa maxay ogaysiinta aan helayo haddii ay rabaan in ay qaataan lacag celintayda?
Marka hore gobolka ama wakiilka degmada wuxuu weydiisanayaa Waaxda Dakhaliga in ay qaataan lacag celintaada. Markaas 5 maalmood gudohood, gobolka ama wakiilka degmada ee aaminsan in aad lacag ka qabtid waa in ay kuu soo diraan ogaysiin xuquuqdaada.
Ogaysiintu waxay kuu sheegaysaa:
Waxa dayntu tahay, tiradeeda, iyo goorta ay dhacday.
In ay rabaan in ay usticmaalaan dib u soo qabashada
In aad ka dacwoon kartid daynta iyo in adiga tahay cidda ay la xiriirto dib u soo qabashada dakhliga
Sida aad uga hortegi kartid dib u soo celinta dakhli
In aad racfaan ka qaadan kartid
Sidee racfaan uga qaataa?
U qor wakiilka sheeganaya in ay lacag kugu leeyihiin, ha u qorin waraaq Waaxda Canshuuraha. Ku qor dusha sare ee warqadda “ Racfaan Ka Qaadasho Canshuurta”. Si kooban u sharax sabata aysan u haysan karin lacag celintaada.
Sababuhu waxay noqon karaan in:
Adiga aadan ka qabin wax lacag ah ama
Xitaa haddii aad qabto lacagta, in dib u soo qabashada dakhliga ay kaa ilaalinayso - arrimaha kor ku xusan.
Hayso koobi ka mid ah warqadda. Wakiilku waa in uu helaa warqaddaada 45 maaalmood gudohood ka bilaabata taariikhdii ogaysinta laguu soo diray. Wakiilku waa in uu qabtaa ballan dhegeeysi 30 maalmood gudohood. Uma baahnid garyaqaan, laakiin waad u yeeran kartaa mid haddii aad rabto.
Xaq uma lihid dhegeeysi haddii uu jiro xukun ama amar maxkamadeed.
Haddii wakiilku uusan ku siin ogaysiin waxa aad xaq u leedahay, weli racfaan waad qaadan kartaa:
Wakiilka u qor oo weydiiso racfaan
45 maalmood ma bilaabanayaan illaa laguu soo diro ogaysiin qoraal ah oo kuu sheegaysa in ay rabaan in ay isticmaalaan dib u soo qabasha dakhliga.
Haddii wakiilku yiraahdo waxaan kuu soo dirnay ogaysiin, laakiin adigu weligaa ma helin, markaas waxaad leedahay dhegeeysi 2da arrimoodba. Midda koowad, dhab ahaan ma heshay ogaysiinta?, midda labaad ma qaadan karaan lacag celintaada?